किसानलाई अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण ! - krishipost.com
किसानलाई अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण !
सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाले नगरभित्रका किसानलाई अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण गरेको हो ।
मौरीपालनमा अब्बल नगर बनाउने उद्देश्यसहित ११ वटै वडाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका ३३ परिवारलाई अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण गरेको नगरप्रमुख भरतकुमार खत्रीले बताउनुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई सातदिने मौरीपालनसम्बन्धी तालिमसहित मङ्गलबार मौरीसहितको घार वितरण गरिएको नगरप्रमुख खत्रीले बताउनुभयो ।
घारसहितको मौरी वितरण गर्दे नगरप्रमुख खत्रीले सहभागीलाई व्यावसायिक बन्न आग्रह गर्दै नयाँ व्यवसायीलाई थप सहयोगसमेत गर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले ११ वटै वडाबाट छनोट भएका ३३ अपाङ्गता परिवारलाई घारसहितको मौरी वितरण गरिएको बताउनुभयो ।
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत चैनपुर नगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको लागत साझेदारीमा पुस १४ देखि २० गतेसम्म मौरीपालनसम्बन्धी तालिम गरिएको कार्यक्रमका फोकल पर्सन सूर्यकिरण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रमअनुसार मौरीपालनका लागि किसान छनोट गरिएको भण्डारीले बताउनुभयो । फाईल तस्विर